FAQs - Ômnia CNC Teknolojia Co., Ltd
-drano fiaramanidina fanapahana milina
Ny vidin-javatra dia mety miova miankina amin'ny milina fanahafana sy manome tsena lafin-javatra. Dia handefa anareo nohavaozina vidiny lisitra rehefa avy nanamarina ny mety milina fanahafana ho anao sy ny teny nindramina dia manan-kery ao anatin'ny iray volana.
Afaka manao ny fanonerana ho an'ny banky, Western Union na PayPal: sales@omni-cnc.com.
CNC ny router-feno 12 volana indray ny base fiantohana ny cnc sy manan-danja ny router mpanamboatra fiantohana amin'ny antoko faha-3 hametraka ons. Izany manarona herinaratra sy ny milina faritra eo ambany 'ny fampiasana ara-dalàna ".
Laser Machine-feno 12 volana indray ny base fiantohana eo amin'ny milina sy ny manan-danja tamin'ny laser mpanamboatra warrty amin'ny antoko faha-3 manampy ireo afa-tsy consumable faritra. Warranty for tamin'ny laser Tube Reci marika: 6 volana, Lens & Mirror: 3 volana.
CNC betsaka ao amin'ny plasma Machine-feno 12 volana indray ny fototra sy manan-danja fiantohana manufactures warraty amin'ny antoko faha-3 manampy ireo afa-tsy consumable faritra. Toy ny hoe: nozzle, electrode, fiarovana Cap etc.
Ny sambo vola Miankina amin'ny fomba misafidy ny mahazo ny entana. Express no tokony haingana indrindra fa koa fomba lafo indrindra, ihany no sahaza ho an'ny Mini tamin'ny laser na ny router. Ny seafreight no vahaolana tsara indrindra ho an'ny cnc ny router milina na tamin'ny laser, ranon-dra milina. Izay indrindra ny tahan'ny entana ihany isika rehefa avy nanonona manamafy milina modely, ary izany koa frieignt notsongaina ihany no manan-kery ao anatin'ny iray volana.
Adiresy: 6-50-501 Advanced Business Center, Tianqiao, Jinan, Shandong
Chat amin'ny Skype